ट्विटरमा मेरा समस्याहरू कसरी ठीक गर्ने? ➡️ ➡️ अनुयायीहरू ➡️ ➡️
संग ट्विटर मद्दत केन्द्र, प्रयोगकर्ताले आफ्नो प्रयोगकर्ता खातासँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्न सक्दछ: लगइन, निलम्बित खाता, ह्याक गरिएको प्रोफाइल र प्लेटफर्ममा उसको खाताको सुरक्षा सुधार।
प्रयोगकर्ताले प्रयोगको सामान्य मामिलाहरूको समस्याहरू समाधान गर्न सक्दछ: सूचनाहरू, फोटो र भिडियोहरू, आफ्नो प्रोफाइलसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू, पहिचान ठगी, दुरुपयोग वा उत्पीडन, फिसि or वा स्पाम र संवेदनशील सामग्री।
प्रयोगकर्ताको उसको ट्विटर मद्दत केन्द्रमा सूचित गरिएको छ नियमहरु र नीतिहरु सामाजिक नेटवर्क को उपयोग; यसले तपाईंलाई प्रकाशनहरू, कुराकानीमा भाग लिइरहेको, सन्देशहरूमा, जब कुनै प्रकारको दुरुपयोग र नियम तोड्ने नियम नबनाउनेमा मार्गदर्शन गर्दछ।
नयाँ ट्विटर टिप जार सुविधा
ट्विटरले एउटा नयाँ रिपोर्ट गरेको छ टिप जार भन्ने प्रकार्य स्पेनिशमा यसको मतलब टिप्सको जार हो; जसले प्रयोगकर्तालाई अरूलाई आँखा तान्ने, उत्तेजक दिने, अन्तरदृष्टि र प्रेरणादायक ट्वीटको लागि भुक्तान गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।
ट्विटरका अनुसार, प्रयोगकर्ता सचेत छ किaटिप जारको लागि खाता सक्षम गरिएको छ जब तपाइँ तपाइँको प्रोफाइल पृष्ठ मा फलो बटन को छेउमा एक टिप जार आइकन याद गर्नुहुन्छ। भुक्तान गर्न, तपाईंले भर्खर आईकनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ र प्रयोगकर्ताले सक्षम गरेको भुक्तानी मेनू देखा पर्नेछ।
अर्को, कुन चाहिएको भुक्तान सेवा छनौट गर्नुहोस् र यो हुनेछ ट्विटरबाट स्थानान्तरण साइट छ जहाँ तपाईं आफ्नो छनौट राशि मा आफ्नो समर्थन देखाउन सक्नुहुन्छ। टिप जारले सेवाहरू समावेश गर्दछ: PayPal, VENMO, Patreon, नगद अनुप्रयोग र ब्यान्डक्याम्प।
TWEET मा किन स्रोत ट्यागहरू राख्ने?
को भूमिका फन्ट ट्यागहरू डेल ट्वीट प्रयोगकर्तालाई ट्वीट कसरी प्रकाशित भयो भनेर अझ राम्रोसँग बुझ्नको लागि मद्दत गर्नु हो। त्यस्ता ट्यागहरू, ट्वीट र यसको लेखकमा अधिक प्रस context्ग थप्नुहोस्, राम्रो उद्देश्य र यसको अभिप्राय बुझ्ने सुविधा प्रदान गर्दै।
यदि प्रयोगकर्तालाई स्रोत थाहा छैन भने, उसलाई आवश्यक छ थप जानकारी खोज्नुहोस् र निर्णय गर्नुहोस् कि सामग्री भरोसायोग्य छ; यो गर्नका लागि तपाईले गर्न आवश्यक पर्दछ: विवरण पृष्ठमा जानका लागि एउटा ट्वीटमा क्लिक गर्नुहोस्; ट्वीटको तल स्रोत स्रोत छ, उदाहरणका लागि: एन्ड्रोइडको लागि ट्विटर।
ट्वीटरमा विज्ञापनदाताहरूका लागि ट्विटर ट्यागले संकेत गर्दछ कि ट्वीटहरू प्रयोग गरेर सिर्जना गरिएको थियो ट्विटर विज्ञापन को निर्माता। केहि केसहरूमा प्रयोगकर्ताले अवलोकन गर्न सक्दछ कि केही ट्वीटर ट्विटर बाहेक अरू कुनै अनुप्रयोगबाट आएका हुन्।
ट्विटरमा तपाईंको आफ्नै कथा भन्नुहोस्
यदि प्रयोगकर्ता चाहन्छ तपाईको आफ्नै कथा भन्नुहोस्, ट्विटरले यी कार्यहरू प्रदान गर्दछ: सबैभन्दा ठूलो प्रभाव प्राप्त गर्ने इरादाको साथ ट्वीट्सको थ्रेड सिर्जना गर्नुहोस्, शीर्षक र सूचीहरूको माध्यमबाट तपाईंको समुदायलाई फेला पार्नुहोस्, व्यवस्थित गर्नुहोस् र ह्याशटैगबाट शब्द फैलाउन सहयोग गर्नुहोस्।
थप रूपमा, प्रयोगकर्ता हुनुपर्दछ लगातार साझा गर्नुहोस् तपाईंको समुदायले रिट्वीटहरूको प्रयोग गरेकोमा टिप्पणी गरिएको छ वा छैन, फोटो र भिडियोहरू तपाईंको अनुयायीहरू र तपाईंको समुदायसँग पोस्ट गर्नुहोस् अधिक व्यक्तिगत टच दिनको लागि।
प्रयोगकर्तालाई वर्तमानमा के भइरहेको छ साझेदारी गर्न आवश्यक छ प्रत्यक्ष पल; र तपाईंको प्रोफाइल निजीकृत गर्नुहोस्, यहाँ जीवनी सधैं अपडेट हुनै पर्छ र तपाईंको भर्खरको सन्देश शीर्षमा पोष्ट गरिएको।
1 नयाँ ट्विटर टिप जार सुविधा
2 TWEET मा किन स्रोत ट्यागहरू राख्ने?
3 ट्विटरमा तपाईंको आफ्नै कथा भन्नुहोस्